सुडानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै पक्राउ ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
सर्लाहीमा कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा गोली चल्यो
चिनियाँ कम्पनीले लिएको विमानस्थलको ६ अर्ब ठेक्का ; ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुँदा पनि काम अलपत्र
निर्माणाधीन पक्की पुल ढल्यो
कांग्रेसको निर्वाचन समिति संयोजकमा घिमिरे नियुक्त, यादवले दिए राजीनामा
मेयरको राजीनामा माग्दै जनकपुरधामका वडाअध्यक्ष काठमाडौंमा
Homeअन्तराष्ट्रियसुडानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै पक्राउ !
सुडानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै पक्राउ !
शेयर गर्नु होस
खार्तुम : सुडानको सेनाले प्रधानमन्त्री अब्दल्लाह ह्यामडकसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई पक्राउ गरेको छ । सोमबार साँझ उनीहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको अलजजिराले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ह्यामडकसहित उद्योगमन्त्री इब्राहिक अल सेइख, सूचनामन्त्री हम्जा बलौल र प्रधानमन्त्रीका सूचना सल्लाहकार फैसल मोहम्मद सलेह समेत पक्राउ परेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सुडानका एक अधिकारीले एसोसिएटेड प्रेसलाई पक्राउको पुष्टि गरे ।
गत महीना असफल कूको प्रयास भएपछि सुडानमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ । त्यहाँ लामो समयदेखि शासनमा रहेका नेता ओमार अल बसिर सत्ताच्युत भएपछि शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच तनाव चुलिँदै आएको छ । सन् २०१९ मा भएको सडक प्रदर्शनपछि अल बसिर पदबाट हटेका थिए ।
उनी सत्ताबाट हटेपछि त्यहाँको राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्न सन् २०२३ मा चुनाव गर्ने सहमती जुटेको थियो । अलजजिराका अनुसार सबै संचारमाध्यम काटिएपछि संचारसम्पर्क गर्न मुस्किल भएको छ । सेनाले खार्तुम सहरसँग जोडिने सबै सडक र पुलहरु पनि अवरुद्द गरेको छ ।
Previous articleभारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
Next articleस्थानीय तहको चुनाव चैत पहिलो साता गर्न सिफारिस
Dannie Newbold on सिरहामा कटुवा पेस्तोल सहित एक पक्राउ
Maisie Nenno on सिरहामा कटुवा पेस्तोल सहित एक पक्राउ
Kimber Ramstad on आज अधिकांश स्थानमा वर्षा, उच्च हिमाली भेगमा हिमपात
Doria Hoerl on लोडसेडिङ हटाउने मास्टर प्लान मेरै, कुलमान ल्याउने पनि मै : ऊर्जामन्त्री रायमाझी
Camellia Hwee on सप्तरीबाट १५ हजार घुससहित लेखनदास अख्तियारको फन्दामा
Lanette Bolognia on सिरहामा कटुवा पेस्तोल सहित एक पक्राउ
Tarsha Beckham on नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको रुपन्देही अध्यक्षमा राजु गुरुङ
Virgen Holme on आज अधिकांश स्थानमा वर्षा, उच्च हिमाली भेगमा हिमपात
Clementina Henly on लोडसेडिङ हटाउने मास्टर प्लान मेरै, कुलमान ल्याउने पनि मै : ऊर्जामन्त्री रायमाझी
Yvette Wikle on सप्तरीबाट १५ हजार घुससहित लेखनदास अख्तियारको फन्दामा
आरती अधिकारी on सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा स्थानियले चीन विरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं उपत्यकामा ३७७ थपिए संक्रमित - नेपाल एक्सन Online News Nepal on एकैदिन थपिए १ हजार १११ कोरोना संक्रमित
एक साता निषेधाज्ञा बढाउने निणय - नेपाल एक्सन Online News Nepal on एकै दिन उपत्यकामा २३२ संक्रमित
लम्ब्याउदै एक साता निषेधाज्ञा - नेपाल एक्सन Online News Nepal on एकै दिन उपत्यकामा २३२ संक्रमित
साप्ताहिक राशिफल - नेपाल एक्सन Online News Nepal on भाद्र महिनको मासिक रासिफल
Santosh rai on गोलि हानी हत्या गरिएका साधुलाई सहिद घोषणा गर : बिश्व हिन्दु परिषद
भारतलाई अस्थिर बनाउन आतंकवादी समूहलाई सहयोग गर्दै पाकिस्तान - नेपाल एक्सन on पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसलाई एमक्यूएमले कालो दिनको रुपमा मनायो
महाकाली नदिमा अबैध उत्खनन् मा रोक - गैरकानुनी उत्खनन on औषधसहित एक युवक पक्राउ:दार्चुला
रासिफल भाद्र २ गते - रासिफल २०७७ भाद्र २ गते मंगलबार on भाद्र महिनको मासिक रासिफल
दार्चुलामा लागू औषधसहित एक युवक पक्राउ - Taja Samachar on सुदूरपश्चिममा थप दुई जनामा कोरोना पुष्टि पछिल्लो २४ घण्टामा
भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिँह धोनी पछि सुरेश रैनाले एकैदिन लिए सन्यास - on अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए : धोनी
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए : धोनी - on भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिँह धोनी पछि सुरेश रैनाले एकैदिन लिए सन्यास